जनताको भरोसाको गर्ने पार्टी कांग्रेस : नेता गिरी - Goraksha Online
तुलसीपुर, १८ साउन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले कांग्रेस जनताको भरोसाको पार्टी भएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं. ३ क दाङले तुलसीपुरमा आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य गिरीले जनताले कांग्रेसप्रति विश्वास गर्ने भन्दै कांग्रेस कसरी बलियो हुन्छ त्यसतर्फ अब सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले कांग्रेस पार्टी नै देश र जनताको भलो गर्ने पार्टी भएको भन्दै कांग्रेसप्रति युवा, दलित, महिला, तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुको आक्रर्षण बढेको समेत बताए । उनले हालको सरकारले जनविश्वास गुमाइसकेको भन्दै जनताको भरोसाको पार्टी कांग्रेस भएको भन्दै कांग्रेसको भूमिका खोज्न थालेको बताए ।
‘देशमा लुटतन्त्र मच्चाउनका लागि नेकपाले एकता भएको हो, यो सबै अहिले आएर प्रष्ट भएको छ’, गिरीले भने । उनले जनतालाई नेकपाले झुट्टा आश्वासन दिएको भन्दै अब झुटको पछि कोही पनि नलाग्ने बताए । ‘अहिले देशको अवस्था सबैले देख्नुभएको छ, किसानले मल पाएका छैनन्, विकासको अवस्था पनि यस्तै जताततै बेथिति छ’, उनले भने । केन्द्रीय सदस्य गिरीले राष्ट्रियता तथा समृद्धिको नारा लगाउने अहिलेको सरकार सबै किसिमले फेल भइसकेको बताए ।
उनले यही अवस्था कांग्रेस सत्तामा भएको भए देशमा आगो बाल्ने अवस्था अरुले ल्याउने बताए । उनले कांग्रेसले भद्र प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको भन्दै यसलाई कमजोरी नसम्झन पनि पनि आग्रह गरे । ‘अब जनताले कांग्रेसको आवश्यकता देखेका छन्, यो देशको विकास र जनताप्रति उत्तरदायी पार्टी कांग्रेस नै रहेछ भन्ने पुष्टि पनि भएको छ’, गिरीले भने । उनले कांग्रेसप्रति युवा, विभिन्न जातजाति र बर्गका व्यक्तिहरुको उत्सुकता जागेको बताए । गिरीले अब सबैलाई समेटेर कांग्रेसलाई बलियो बनाउन एक हुनुपर्ने बताए ।
‘मेरा पनि केही कमी-कमजोरी भए होलान्, सबैले कमी-कमजोरीलाई सच्याउँदै पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ’, उनले भने । उनले आफू मन्त्री हुँदा यस क्षेत्रको विकास धेरै भएको भन्दै अहिले समृद्धिका कुरा गर्नेले विकास दिन नसकेको बताए । ‘यहाँको सिचाई होस् वा बाटो पुलपुलेसा सबै विकासको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो’, उनले भने । उनले टरिगाउँ एयरपोर्टमा बाजा बजाउने मात्र भएको भन्दै यसमा बजेट विनियोजन नगरेर दाङवासीलाई झुक्काएको बताए ।
उनले फेरि पनि जनताले देशको विकास र निकासका लागि कांग्रेसको विकल्प खोजेको बताए । केन्द्रीय सदस्य गिरीले कांग्रेसले अब वितरण गर्ने क्रियाशील सदस्यतालाई समानुपाति र कांग्रेसको संगठनमा सक्रियतापूर्वक लागेकालाई दिनुपर्ने बताए । ‘सक्रिय, विद्यानलाई मान्ने र लोकतन्त्रप्रति कटिवद्ध भएकाहरुले क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्छ, अब कुनै व्यक्तिले होइन त्यो अधिकार वडा इकाई दिएको छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा पार्टी सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले पार्टीलाई संगठित गरी बलियो बनाउनतर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताए । उनले सबै पक्ष जिम्मेवार भएर कांग्रेसलाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्न आग्रह गरे । त्यसैगरी संविधानसभाका सदस्य बुद्धिराम भण्डारीले सबैको त्याग र तपस्याले निर्माण भएको कांग्रेसलाई बलियो बनाउन अब सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले कांग्रेस नै सबैको हित गर्ने पार्टी भएको बताए । त्यसैगरी कांग्रेसका नेता केशव आचार्यले कांग्रेसले हार्दा जनतालाई अन्याय भएको भन्दै विकास निर्माणले पनि हारेको बताए ।
‘कांग्रेसको जितका लागि सबैको एकता आवश्यक छ, कांग्रेसलाई जिताएर कांग्रेसको सरकार बनाउन सबै लाग्नुपर्छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा कांग्रेस दाङका जिल्ला सचिव शंकर डाँगीले अहिले देश कता जाने हो भन्ने अवस्था आएको भन्दै कांग्रेस नै जनताको हित र देशको विकास गर्ने पार्टी सिद्ध भएको बताए । क्षेत्रीय सभापति जगतबहादुर खड्का, कांग्रेसका नेता जोगेन्द्र विश्वकर्मा, कांग्रेस नेतृ देवकी नेपाली, तरुणदलका जिल्ला उपाध्यक्ष मुक्ति न्यौपाने, नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य युवराज खड्कालगायतले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताएका थिए । क्षेत्रीय सभापति घनश्याम ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सभापति ढकालले कांग्रेसमा सक्रिय भई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा तथा कांग्रेसको संगठन निर्माण र विभिन्न समयमा योगदान गर्नेहरुको सम्मानका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए ।
क्षेत्र नं. ३ का उपभासपति प्रमोद बस्नेतको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव चूणर्बहादुर चौधरीले गरेका थिए । सो अवसरमा क्षेत्र नं. ३ क का प्रजातान्त्रिक सेनानी तथा कांग्रेसका अग्रज विभिन्न ५० जना बढीलाई सम्मान गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा कांग्रेसका अग्रज पुराना योगदान गरेका व्यक्तिहरु कृष्णकुमार गिरी, यमप्रसाद शर्मा पाण्डे, विश्वराज गौतम, नारायणी न्यौपाने, छविलाल रेग्मी, शिवराज सिंह ठकुरी, निमकान्त ढकाल, काशीराम दाई, हरिदत्त कार्की, रामबहादुर चौधरी, छन्द्रबहादुर खत्री, प्रदीप डाँगी, राजबहादुर खत्री, चूणर्बहादुर चौधरी, जुगराम चौधरी, बलबहादुर वली, भरथती चौधरी, निमराज भुसाल, पिमलाल डाँगी, मानबहादुर चौधरीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी सम्मानित हुनेहरुमा प्रेमबहादुर भण्डारी, पदमबहादुर बस्नेत, लिलामणि गौतम, ऋषिराज आचार्य, नोखी रावत, मिना धिताल, रामशरण चौधरी, ईश्वरीप्रसाद खत्री, नारायण नेपाली, चेतबहादुर अधिकारी, नरबहादुर वली, यमराज केसी, ज्ञानबहादुर सुवेदी, बुझौना चौधरी, कमला शर्मा, कणर्बहादुर बुढा, बासुदेव शर्मा, बासुराम गिरी, टीकादेवी रेग्मी, भीमबहादुर बुढा, दलबहादुर नेपाली, भरतमणि शर्मालगायतका रहेका छन् ।